Tilmaama taphoota Piriimiyeer Liigii torbee kanaa - BBC News Afaan Oromoo
Tilmaama taphoota Piriimiyeer Liigii torbee kanaa
Goodayyaa suuraa Siitiin adda addummaa qabxii 15'n liigicha dursaa jira
Arseenaal amma bifa addaa kan argatan fakkaatu. Obaamayaangiif Miikhiitaariyaan erga mallatteessanii booda Oziilis waliigaltee dheereffateera. Garuu Eevartan waliin yoo taphatan taphataansaanii duraanii Waalkoot garaagarummaa uumaa laata kan jedhu eeguun mishaadha.
Yunaayitid Saancheeziin mallatteessisus Tootanhaamiif harka kennuurraa hin hambifneen. Cheelsiinis Boornimaziif harka kenneera. Torbee kanatti taphoonni taasifaman maal ta'u laata?
Barnileey fi Maan Siitii
Barnileey tapha darberratti sa'aatii dhumaan galchii lakkoofsisaniin Niiwukaasil waliin walqixa ba'aniiru, ta'us taphoota walitti aanan saddeet moo'uu hin dandeenye.
Dursaan liigichaa Siitiin akkamiin kilaboota babbanuu akka danda'an itti beeku, Barnileey sana yoo dandamatan natti hin mullatu.
Boornimaz fi Istook
Boornimaz Roobii darbe Cheelsii haala gaariin injifataniiru, sana milkeessuufis tapha garii mullisani.
Tapha taasisan irratti haala walfakkaatuun osoo itti fufanii, sochii gaarii yeroo hunda mullisuu akka danda'an natti dhaga'ama.
Biraayitan fi Weesti Haam
Joordaan Hiiwujiil Pireestan irraa guyyaa dhumaatti kan mallatteessisan warri gadduummii, sochii akkamii agarsiisu kan jedhu kan eegamudha.
Akkasummallee taphataa sarara gidduu Jowaawoo Maariyoo Iintar Miilaan irraa kan mallatteessisan yoo ta'u, taphataan kunis bittaa gaarii fakkaata. Ta'us garuu rakkoo miidhama taphattootaa amma qabaniin, gareen Mooyees cimina guutuun dhufuuf yeroo itti fudhachuu mala.
Leestar fi Siwaansii
Riyaad Mahaareez erga waliigalteen Siitii waliin gochuuf ture harkaa fashalee, ammas taphataa Leestari. Garuu ganna dhufu namoota ba'an keessaa tokko ta'uusaatu natti mullata.
Leestaris tapha inni irratti hin hirmaanne kana Eevartaniin injifatamaniiru.
Siwaansiin gama biraan injifannoo guddaa Arseenaal irratti gonfataniiru. Kanaafis tapha bareedaa agarsiisanii turani.
Maan Yunaayitid fi Haadersifiild
Omkololeessa darbe yoo wal argan Haadersifiild haala bareedaan 2-0 Yunaayitidiin yoo moo'an argeen ture.
Yunaayitid Roobii darbe Weembileeyitti Tootanhaamiif harka kennaniiru, gareen Mooriinhoo Oldi Tiraafoorditti kana ni jijjiiru jedheen yaada.
Weesti Biroom fi Saawuzihaampitan
Gareen lamaanuu dhuma PL irra jiru, kana ammoo jalqaba irratti hin eegnen ture.
Weesti Biroom kabaja taphataa isaanii duriif taasisan injifannoon osoo dabaalanii miidhagaa ta'a.
Arseenaal fi Eevartan
Eevartan bara 1996 sa'aatii dhumaa irratti galchii Andireeyi Kaanchelskii lakkoofsiseen Haayiberiitti erga moo'anii booda Arseenaaliin injifachuu hin dandeenye.
Adeemsa fokkisaa kana ni jijjiiru jedhee hin yaadu, garuu injifannoon gidduu torbee kanaa irratti argatan bara haara kanatti kan jalqabaa ta'uunsaa waan kana dhaabuuf ni gargaaraan.
Tiiwoo Waalkoot kilaba isaa durii waliin yoo taphatu waan hojjatu arguuf dharra'us Obaamayaangi taphataa ani dinqisiifadhuuf garaagarummaa guddaa tapha kanarratti uumudha jedheen yaada.
Kiriistaal Paalaas fi Niiwukaasil
Niiwuukaasil taphattoota lama sa'aa dhumaarratti mallatteessifataniiru. Iislaam Siliimaanii Leestar irraa akkasumas Keenedii Cheelsii irraa. Taphattoonni kunneenis kan dur qabanirraa fooyya'oodha.
Paalaas sadarkaa tokko qofaa isaanirra caalanii argamu, ta'us haala gaariin ni injifatu jedheen yaada.
Liivarpuul fi Tootanhaam
Injifannoon Liivarpuul Haadersifiildirratti argatan gama kamiinuu kan isaan barbaachisu ture - galchiin osoo itti hin lakkaa'amin fi dogoggora ittisaa tokko malee injifachuuf carraa hedduu uumanii turani.
Isparsi gama biraan haala gaariirra akka jiran Yunaayitidiin moo'uun agarsiisaniiru, Mudde darbe erga Siitiin moo'amanii boodas hin injifatamne. Kanaanis waan itti fufan fakkaatu.
Waatfoordi fi Cheelsii
Cheelsiin erga Antooniyoo Koonteen leenji'uu eegalanii as sochii badaa akkasii yoo agarsiisan arginee hin beeknu. Osoo garee injifataa sana hin argatin durallee.
Waatfoord amma sadarkaa mishaarra jiraatanus, taphoota itti aanan ni moo'amu taanaan gara sadarkaa liigicha keessaa ba'anitti gadi sigigaatu - garee gara sanatti dhidhimaa jiranis ta'aniiru.
Ol ba'uuf garee yaalan miti, baay'ee of eeggachuu qabu.